रुस-युक्रेन युद्ध जारी रहेका बेला देश छोडेर कहाँ गए अमेरिकी राष्ट्रपति ? — Imandarmedia.com
रुस-युक्रेन युद्ध जारी रहेका बेला देश छोडेर कहाँ गए अमेरिकी राष्ट्रपति ?
काठमाडौ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेनलाई समर्थन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रयासहरूबारे छलफल गर्न युरोप भ्रमणका क्रममा पोल्याण्डको जाने भएका छन्। यस हप्ता राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जुनियरले ब्रसेल्सको बैठक पछि पोल्याण्डको यात्रा गर्ने ह्वाइटहाउसले जनाएको छ।
उक्त भ्रमण नेटो सहयोगीहरू, जि ७ नेताहरू र युरोपेली संघका नेताहरूसँग युक्रेनलाई समर्थन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रयासहरूबारे छलफल गर्न र रुसमाथि थप दबाब सृजना गर्न विशेष केन्द्रित हुने ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जेन साकीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
मार्च २५ मा राष्ट्रपति बाइडेन पोल्याण्डको वारसा पुग्ने र त्यहाँ उनले राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडासँग द्विपक्षीय बैठक गर्ने तयारी छ। राष्ट्रपतिले हाम्रा सहयोगी र साझेदारहरूसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ भनेर छलफल गर्नुहुनेछ’, ह्वाइटहाउसले उल्लेख गरेको छ।
मार्च २३ मा बाइडेन बेल्जियमको ब्रसेल्स पुग्नुहुनेछ। मार्च २४ मा बाइडेनले युक्रेनमा रूसको अप्रत्याशित र अनुचित आक्रमणको प्रतिक्रियामा चलिरहेको प्रतिरोध र रक्षा प्रयासहरूबारे छलफल गर्न एक असाधारण नेटो शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन्।
राष्ट्रपतिले हाम्रा नेटो सहयोगीहरू र नेटो क्षेत्रको रक्षा गर्नको लागि कडा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै रूस र युक्रेनबीच युद्ध अन्त्य गर्ने वार्ता सफलता नजिक पुगेको मध्यस्थकर्ता टर्कीले जानकारी दिएको छ।
दुवै पक्ष युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति नजिक पुगेको टर्कीका विदेशमन्त्री मेब्लुत चोवाशुग्लूले बताएका हुन्। ​चोवाशुग्लूले भनेका छन्, ‘युद्धमा आम नागरिक मारिइरहँदा सजिलै सहमति कायम हुँदैन, तर यस्तो स्थितिबीच पनि वार्ता अघि बढिरहेको छ ।
दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेको आफूहरूले देखेको चोवाशुग्लूले दाबी गरेका हुन्। ​चोवाशुग्लू गत साता युक्रेन र रूस दुवै मुलुक पुगेका थिए। युद्धरत दुवै मुलुकसँग टर्कीको बलियो सम्बन्ध छ ।
टर्कीले नै युद्ध अन्त्य गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउने प्रयास गरिरहेको छ। गत साता नै टर्कीले युक्रेन र रूसका विदेशमन्त्रीलाई अंकारामा स्वागत गरेको थियो।
चोवाशुग्लूले टर्की दुवै देशका वार्ताकार समितिको सम्पर्कमा रहेको पनि बताएका छन्। टर्कीले इमानदार मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाइरहेको उनको भनाइ छ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआनका विदेश नीति सल्लाहकार इब्राहिम कालिनले पनि एक अखबारसँग कुरा गर्दै रूस र युक्रेनबीच ६ बुँदे सहमति प्रस्तावमाथि वार्ता भइरहेको बताएका थिए।
६ बुँदाहरूमा युक्रेनको तटस्थता, असैनिकीकरण तथा सुरक्षा ग्यारेन्टी, गैर नाजीकरण, युक्रेनमा रूसी भाषा प्रयोगमा अवरोध अन्त्य र पृथकतावादी डोनबास क्षेत्रमा रूसको नियन्त्रण तथा सन् २०१४ देखि रूसको नियन्त्रणमा रहेको क्रिमियाको स्थिति सामेल गरिएको छ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले शान्तिका लागि लगातार अपील गरिरहेका छन्। उनले रूसलाई वार्ता प्रस्ताव स्वीकार्न र आक्रमण रोक्न आग्रह गरेका हुन्। शनिबार उनले भनेका थिए, ‘यो मिल्ने र कुराकानी गर्ने समय हो।
युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता र निष्पक्षता नवीकरण गर्ने समय हो । टर्कीले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई स्वागत गर्न तयार रहेको पनि बताएको छ।
चोवाशुग्लूले शान्तिका लागि आफूहरूले दिनरात काम गरिरहेको र युद्धविराम गर्नेमा आशावादी रहेको बताएका हुन्। रूसी सेनाले फेब्रुअरी २४ देखि युक्रेनमाथि आक्रमण थालेको हो।
रूसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन आक्रमणलाई रूसको विशेष सैन्य अभियान भएको बताइरहेका छन्। युक्रेन र पश्चिमा मुलुकहरूले भने पुटिनले युक्रेनमा हिंस्रक युद्ध गरिरहेको जनाएका छन्। रूसले केही दिनयता युक्रेनमा अत्याधुनिक हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र दागिरहेको छ।
रुसले पछिल्लो ३० दिनयता युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेको छ। सो क्रममा रुसले युक्रेनमा दुईवटा हाइपरसोनकि क्षेप्यास्त्र हानिसकेको छ।हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र त्यस्तो अस्त्र हो जुन ध्वनीको गतिभन्दा तिव्र हुन्छ। यस्ता क्षेप्यास्त्र आणविक क्षमताका पनि हुन्छन्।
रुसको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार पश्चिमी युक्रेनमा हाइपरसोनिक ब्यालेस्टिक मिसाइलका कारण युक्रेनका ठूला भूमिगत हतियार डिपो नष्ट भएका छन्। बीबीसीहिन्दीका अनुसार कुनै युद्धमा यस्तो क्षेप्यास्त्र प्रयोग भएका यो पहिलो घटना हो।
प्रहार गरिएको ब्यालेस्टिक मिसाइलको नाम किंजल भएको जनाइएको छ। यी मिसाइललाई सम्भवतः मिग–३१ लडाकु विमानको मद्दतले छाडिएको हुनसक्छ।
रुसका अनुसार उनीहरुले प्रयोग गरेको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र ६ हजार किलोमिटर प्रति घण्टाभन्दा बढीको बेगमा २,००० किलोमिटर टाढासम्मको लक्ष्यलाई मार हान्न सक्षम छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले गत डिसेम्बरमा रुस हाइपरसोनिक मिसाइलमा वर्ल्ड लिडर भएको र आफूसँग ट्र्याक गर्न मुश्किल र उडानको बीचमा नै दिशा फेर्न सक्ने मिसाइल भएको दाबी गरेका थिए।
यो क्षमताले रुसी क्षेप्यास्त्रलाई दुश्मनको नजरबाट लुकेर हमला गर्न मद्दत पुग्छ। तर, लराका अनुसार मिसाइललाई ट्र्याक गर्न खासै मुश्किल भने हुँदैन। सन्देश के हो?
चारवर्ष अगाडि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले किंजल क्षेप्यास्त्रलाई अत्याधुनकि र शक्तिशाली हतियारको एउटा श्रृङ्खलाको रुपमा पेश गरेका थिए। उनले यो दुश्मनको रक्षा कवचलाई छेड्न पनि सक्षम रहेको बताएका थिए।
रुससँग भएका अन्य हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन र अवान्गार्ड हुन् र यी पनि तीब्र र अत्यधिक टाढासम्म पुग्नसक्छ। किंजल पारम्परिकसँगै परमाणु हतियार आफूसँगै लैजान सक्षम छ।
ज्यूरिकस्थित सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडीजका डोमिनिका कुनेर्तोभा भन्छन्, यो पश्चिम राष्ट्रका लागि चेतावनीको संकेत हो किनभने पश्चिमी देशले युक्रेनलाई हतियार पठाउने हिम्मत गरेकोमा पुटिन यसपटक निकै रुष्ट छन्।
युक्रेनमा हाइपरसोनकि हतियार प्रयोग गरेर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रलाई युक्रेन मामिलाबाट टाढै रहन सजग गराएको हुन सक्छन्। त्यसो त रुस विश्वमा सबैभन्दा बढी परमाणु हतियार भएको राष्ट्र हो।
आफ्नो देशमाथि खतरा बढेमा र अस्तित्व संकट आउने देखेमा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने बताइसकेको छ। बीबीसीहिन्दीको सहयोगमा